Isikhongozeli saManzi esiBunjiweyo sasimahla (esineSpigot)
UKUTYA KUMABAKALA OKUTYA OKUNGENAMANDLA:
l Iplastiki ye-LDPE eyenziwe ngomgangatho ophezulu waseJapan ngezinto zokwenza izinto.
l Ubume bendalo obunobungozi
l Akukho BPA PVC okanye i-DEHP
l Akukho vumba leplastiki lePVC
l Incasa yamanzi ayizukuchaphazeleka
Iinketho ezahlukeneyo zoMthamo: 5L 10L 20L.
I-Cubitainers zenziwe nge-polyethylene ephantsi yokuxinana kwaye njengephakheji ehlanganisiweyo, ziza nebhokisi, isikhongozeli, cap emhlophe ye-polypropylene.
Izikhongozeli kunye neebhokisi ziyathengiswa zodwa, umzi-mveliso wethu uthengisa ii-cubitainers e-Alibaba kwi-Intanethi ngaphezulu kweminyaka eli-10.
I-cubitainers yethu ihlangabezana neemfuno ze-FDA kunye nazo zonke izinto ezingafunekiyo ezibenza babe lukhetho olukhulu ekugcineni amanzi kunye nezinye izinto ezininzi ezinokubakho.
I-5 litre ye-gel ibhegi yikhonteyina entsha edibanisa ukuguquguquka kweNgxowa kwiBhokisi kunye nezibonelelo eziphuculweyo zezikhongozeli eziqinileyo okanye ezomeleleyo, ezenza ukuba ibe lolunye ulugqibo kuzo zonke ezi ndlela. Iqulethwe yicube eyenziwe ngetyhubhu, enemigangatho emininzi yeplastikhi, itephu, ikepusi okanye ivalve nebhokisi yekhadibhodi.
Ilitha ezi-5 zeebhegi ze-gel ezenziwe ngeplastiki zenziwe ngeplastiki. Uluhlu lwangaphandle (i-polyamide + polyethylene) lukhusela kwioksijini kunye nokufuma; Ubuninzi bayo kunye nokwakheka kwayo kungahluka ngokuxhomekeke kwiimfuno zomthengi okanye imveliso. Uluhlu lwangaphakathi (i-polyethylene) luthambile kwaye luyamelana nokukrazuka.
Ingxowa ye-Adblue yokupakisha ebhokisini sisiqulathi esitsha esidibanisa ukuguquguquka kweNgxowa kwiBhokisi kunye nezibonelelo eziphuculweyo zezikhongozeli eziqinileyo okanye ezomeleleyo, ezenza ukuba ibe lolunye ulugqibo kuzo zonke ezi ndlela. Iqulethwe yicube eyenziwe ngetyhubhu, enemigangatho emininzi yeplastikhi, itephu, ikepusi okanye ivalve nebhokisi yekhadibhodi.
Ukupakishwa kwe-Adblue kwenziwa ngeplastikhi eninzi. Uluhlu lwangaphandle (i-polyamide + polyethylene) lukhusela kwioksijini kunye nokufuma; Ubuninzi bayo kunye nokwakheka kwayo kungahluka ngokuxhomekeke kwiimfuno zomthengi okanye imveliso. Uluhlu lwangaphakathi (i-polyethylene) luthambile kwaye luyamelana nokukrazuka.
I-Adblue Jerry Can Containers ngomlomo
Ukucocwa kwegesi yemisila yemoto, le adblue Jerry Can Container yenziwe nge-polyethylene ephantsi kwaye njengephakheji ehlanganisiweyo, iza nebhokisi, isikhongozeli, ikepusi emhlophe polypropylene.
Izikhongozeli kunye neebhokisi ziyathengiswa zodwa.
I-adblue yethu kaJerry Can Containers ihlangabezana neemfuno ze-FDA kunye nazo zonke izinto ezingavunyelwanga ezibenza babe lukhetho olukhulu ekugcineni amanzi kunye nezinye izinto ezininzi ezinokwenzeka.
Ikhonkco ye-5 yelitha ye-ultrasound yelitha
I-5 yelitha ye-Ultrollible yeelitha ze-ultrasound yenziwe ngobunzima be-polyethylene ephantsi kwaye njengephakheji ehlanganisiweyo, iza nebhokisi, isikhongozeli, ikepusi emhlophe polypropylene.
Iilitha zethu ezi-5 zelitha ze-ultrasound eziguqukayo ziyahlangabezana neemfuno ze-FDA kunye nazo zonke izinto ezingafunekiyo ezibenza babe lukhetho olukhulu ekugcineni amanzi kunye nezinye izinto ezininzi ezinokubakho.
Esi sixhobo sisetyenziselwa ukuzalisa kunye nokufaka ibhegi ebhokisini.
Impompo ngumbhobho weplastiki weplastiki kwaye unesiphatho sokucima / ukucima isiqingatha kulawulo olupheleleyo kunye nokuchaneka kokuhamba. Ingasetyenziselwa ukuhambisa izinto ezingamanzi ezingatshiyo kwizikhongozelo zethu.
UGUlwazi kunye nengcaciso
Ubungakanani be-10l 20l Semi-Collapsible Jerry Unokwenziwa kwinqanaba lokutya ldpe.
Sisikhongozeli sokusetyenziswa kwendlu ngokubanzi xa kuthwalwa kwaye kugcinwa amanzi okusela.